anopfuura makore makumi maviri ekugadzira ruzivo, tsvimbo 2000, zvikwata gumi zveR & D uye makumi maviri emhando yepamusoro mitsara yekugadzira emakadhi nemategi Toptag inozvipira muR & D, kugadzira uye kutengesa kweRFID zvigadzirwa uye RFID mhinduro.
Iyo isina waya yechiitiko tech yave yakajairwa pamitambo yepamusoro yemimhanzi, nevateveri vanodada vakapfeka maRFID mabhandi emawoko gore rese kutenderera semabheji ekuremekedza. Toptag yaive nekubatana nemitambo mizhinji yakaita seRio festival, SnowGlobe Music Festival nezvimwe.
Toptag ine Kubatanidza tekinoroji yepamberi yekugadzirisa ese maficha ehutano hwehutano mukati meakasiyana nharaunda enzvimbo yehutano - manejimendi manejimendi, kuteedzera kweaseti uye mamiriro ekutarisa, chaiyo-nguva nzvimbo masevhisi, kubhadharisa uye rugare rwepfungwa.
RFID-on-metal transponders inogona kunge iri munzvimbo dzakasiyana siyana dzekuteedzera kweasset uye yakafara mafekitori ekushandisa. Iwo maficha akakosha ndeokuteedzera kweaseti pamaseva uye malaptop muIT data nzvimbo, maindasitiri ekugadzira mhando kutonga uye kugadzira, oiri uye gasi pombi yekugadzirisa, uye magirinda egasi, kuteedzera maturu, kuronda nhumbi, uye ekurapa mhando yemhando yekurapa.
Nhasi, kunyangwe muEC nemakadhi echikwereti, makadhi eIdhi, mapasipoti kana makadhi einishuwarenzi ehutano, data rakachengetwa pane akawanda maRFID machipisi, nerubatsiro rweapp yakakodzera, iyo data yemunhu inogona zvakare kuverengerwa muchivande nenjere mafoni. Makadhi eToptag eRFID anovharira anopa dziviriro yakavimbika kubva pakuverenga kusingabvumirwe kwedata muhuwandu hwe13.56 MHz.
RFID tekinoroji inotungamira simba idzva rekufambisa kwekuchenjera mune ramangwana
Ko tekinoroji yeRFID ichapera here?